Suuriya oo doorashada deegaanka ay kasocoto – Radio Daljir
Suuriya oo doorashada deegaanka ay kasocoto
Seteembar 18, 2018 7:20 b 0
Suuriyiinta ku nool deegaamada ay dowladda maamusho ayaa bilaabay inay dhiibtaan codadkooda doorashada deegaanka markii u horaysay tan iyo sanadkii 2011kii.
Goobaha codaynta ayaa la furay 7:00 am subaxnimo, waxaana la filayaa inay soo xiran ilaa 12 saacadood kadib, iyadoo suurtagal ay tahay waqti dheeri ah oo shan saacadood ah in lagu daro, balse haddii ay baahi timaado, sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee SANA.
Doorashadan ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan musharixiin gaaraysa afartan kun oo u tartami doona sideed iyo toban kun , afar boqol , sideed iyo tobaatan.
Magaalada Dimishiq iyo magaalooyinka kalle ayaa la suray goobaha dadku kulmaan waraaqaha ololaha ee musharixiinta.
Maxamed Kabbadi oo ah 42-sano jir ka mid ah shaqaalaha dowladda oo codkiisa kadhiibtay degmada Bab Sharqi ayaa sheegay inuu garanayo cidda uu codkiisa siinayo, isagoona sheegay inuu ku doortay firfir cooni iyo horumar uu gaarsiin doono deegaankaasi.
Xubanaha deegaanka ayaa sida sharciga dalkaasi uu dhigayo jiraya muddo afar sano ah, waxaana masuuliyadooda ka mid ah heer dowlad hoose iyo bixinta adeegyada dowladda ee bulshada.
Siiriya ayaa doorashadii ugu dambaysay ee deegaanka waxaa la qabtay sanadkii 2011kii, 9 bilood kadib dagaalkii dowladda iyo mucaaradka hubaysan.
Ciidamada dowladda Suuriya ayaa sadex meelood laba ka mid ah gacanta ku haya dhulkaasi Siiriya, waxaana dhowaan ay qabsadeen dhul hor leh oo ku yaala koonfurta dalkaasi.
Boob iyo rabshado kajira Addisababa